भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइनः प्रधानमन्त्री (सन्देशको पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा अाेलीले सुशासन र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहने सङ्कल्प गरेका छन् ।
नववर्ष २०७६ का अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली मिहेनत र पसिनाको कमाइमा विश्वास गर्ने भएकाेले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने घाेषणा दाेहाेर्‍याए ।
“सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो। ‘भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर नबोल्ने– भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने’ मेरो दृढ सार्वजनिक घोषणा हो” उनले भने “भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन, हुनै सक्दैन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि सुखको आधार भएको उच्च र दिगो उत्पादन वर्तमान सरकारको एक मात्र उद्देश्य भएको बताएका छन् ।
नेपाली जनताको चाहना शान्ति, एकता र विकास भएको बताउँदै सामजिक न्याय सहितको समुन्नति ल्याउन आफू प्रतिवद्ध भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैखाले अतिवाद, अशान्ति, आतङ्क र गडबडीबाट मुलुकलाई चाँडै मुक्त गराइने उनको भनाई छ ।
लामो द्वन्द्व र सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर बल्ल स्थायित्वको बाटोमा हिँड्न लागेको मुलुकमा अर्को हिंसाको दुष्चक्र स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने विरोध र असहमतिलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको बताए । “अवाञ्छित प्रतिगामी प्रयासहरु र संविधान विरोधी गतिविधिहरु कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यसै कार्यकालमा देशलाई ‘अतिकम विकसित मुलुक’को टिठलाग्दो हैसियतबाट उकास्ने, सन् २०३० मा तोकिएको दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए ।
“सुशासन, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धति, सवल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मान’ ‘सुखीपन’का सूचक हुन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “हामीले थालेको रोजगारी र लगानीका विभिन्न कार्यक्रमहरु समृद्धिका हिस्सा हुन् । सुशासन समृद्धिको लागि पूर्वशर्त हो ।”
लगानीको लागि भरपर्दो वातावरण हेरी हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुले नेपाललाई दक्षिण एशियाको उदाउँदो अर्थतन्त्र९राइजिङ्ग स्टार० भनेका छन् ।
– मैले धेरैचोटी दोह¥याएको छु, संघीयता हाम्रो लागि विलकुल नयाँ अभ्यास हो । सञ्चालनमा चुनौति छन् । तर,यस शासन प्रणालीको सबै तहका सरकारहरु अहिले व्यवहारबाट सिक्दै, कमी/कमजोरीलाई चिर्दै अघि बढ्दैछन् । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जगैबाट उठ्दैछ, आप्mनै भूमिमा उम्रिएको यो टुसा हुर्किंदैछ । मुलुकको आर्थिक/राजनीतिक रुपान्तरणको यस प्रक्रियामा धैर्यतापूर्वक संलग्न हुने र यसलाई संस्थागत र कामकाजी बनाउन सघाउने सबैलाई म, शुभकामना तथा वधाई दिन्छु ।
– गत चुनावमा नेपाली जनताले स्थायित्व, शान्ति र विकासको पक्षमा मतदानगरे । त्यसैले हामीले,गएको एक वर्ष शान्ति, विकास र समृद्धिको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत जग बसाल्न खर्चियौं । अब, त्यही जगमा उभिएर विकास र समृद्धिको यात्रातीब्र गतिका साथ अघि बढाउँछौं । हामीले हाम्रा संपूर्ण स्रोत, साधन र प्रयासहरु यसैमा खर्चेका छौं । तर आप्mनो मात्रै स्रोत÷साधनबाट हाम्रा आकांक्षाहरु पूरा गर्न संभव नहुने भएकोले नै मित्रहरुसँगको सहकार्य खोजी गरेका हौं । त्यसै खोजीको शुरुवात लगानी सम्मेलनबाट ग¥यौं, जसले बाह्य पूँजी र प्रबिधि आमन्त्रण गर्नमद्दत पु¥याएको छ । यसपछिको अभियान, सक्षम जनशक्ति र किटान गरिएको लक्ष्य सहितको कामबाट अघि बढाइनेछ ।
नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा थालिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? आजैबाट शुरु हुने जेष्ठ–नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले हाम्रा आमा–बाबाहरुलाई के लाभ दिन्छ ?
‘खोलौं बैंक खाता’ कार्यक्रम के हो रु यसले कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ ?
– गएको साल, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष पनि रह्यो । एकपटक सोचौं त– सुशासनकै संयन्त्रभित्र रहेर अवाञ्छित कार्यमा संलग्न कुनै ओहोदावाल यसभन्दा अघि यस तह र व्यापकतामा कहिल्यै छानविनको दायरामा आएका थिए रु एक वर्ष अघिसम्म पनि,पहिलो रोजाइमा पर्ने स्थानहरु आज किन रोजाईमा परिरहेका छैनन् रु शंकाको घेरामा परेका र विगतमा अवाञ्छित कार्यमा संलग्न भनि गन्हाएकाहरु अहिले किन छट्पटिएका छन् रु अनपेक्षित ढंगमा तिनीहरु बुरुक÷बुरुक उफ्रिंदै किन क्रिया/प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् रु
– नयाँ वर्षको आजको दिन म भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिंदैछ । घरजग्गा कारोवारहोस् वा संगठित तस्करी, भन्सार/अध्यागमनको विषय होस् वाहुण्डी कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलन, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणदेखि सबै प्रकृतिका अवाञ्छित/अनुचित कामको छानबिन जारी छ ।
– पुरानो वर्षलाई विदाई र नयाँ वर्षको स्वागत गरिरहँदा आज म, समयलाई हेक्का राखौं भन्न चाहन्छु । हाम्रा सामु अनगिन्ती कामहरु छन् । मैले नेतृत्व गरेको सरकारको यसै कार्यकालमा हामीले हाम्रो मुलुकलाई ‘अतिकम विकसित मुलुक’को टिठलाग्दो हैसियतबाट उकास्नै पर्छ । सन् २०३० मा तोकिएको दीगो विकास लक्ष्य भेट्टाउनै पर्छ । यसको लागि हामी÷हामी बीचको दौड– प्रतिस्पर्धा अफ्रिकी सिंह र हरिणको जस्तै हुनु आवस्यक छ । जे गर्नुछ, हामीले यही एक दशकभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । आउँदो १०/११ वर्षपछि आजको युवा जनसंख्या बुढ्यौलीतिर ढल्कनेछ र हाम्रो विकासको जनसाङ्खिक लाभ सकिनेछ । हामीसित समयको सीमा छ, गर्नुपर्ने काम भने असिमित छन् ।
– यस नयाँ वर्ष सबै नेपालीका लागि थप सुखमय होस् । फेरि एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।